IINKONZO KUNYE NEENGOZI ZE-SKYLIGHTS - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iinkonzo kunye neengozi ze-Skylights
Iinkonzo kunye neengozi ze-Skylights
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiingenelo kunye nokubi kwezikhanyiso zesibhakabhaka ngeentlobo eziqhelekileyo, indleko kunye nofakelo.
Isibane esibhakabhakeni ekhayeni lakho sinokunika izibonelelo ezininzi kwaye sinokunceda ukwandisa ixabiso laso lokuthengisa kwakhona. Zininzi iintlobo zezibane zelanga enokufakwa okanye yakhelwe kwisakhiwo. I-Skylight windows zinemisebenzi eyahlukeneyo ngokuxhomekeke kwimfuno, ezinye zazo siza kuzigubungela apha ngezantsi.
Iindidi eziqhelekileyo zeSibhakabhaka
Iinkonzo ze-Skylight kunye ne-Cons
Ukongeza ifestile yesibhakabhaka
Ngaba kuyabiza ukongeza ukukhanya kwesibhakabhaka?
Ngaba ii-Skylights zixabisa imali?
Ngaba ii-Skylights ziphelelwe lixesha?
Isibane esibhakabhakeni yiwindow efakwe kwinxalenye yesilingi, okanye uphahla lonke. Ukukhanya kwesibhakabhaka kubonelela ngokukhanya kwisakhiwo semini, ukuze ilanga likwazi ukubonelela ngokukhanya kwendalo okuninzi.
Ukongeza ekunikezeni ukukhanya kwendalo ukukhanya kwesibhakabhaka kuhlala kunika indawo yokuphucula umoya, umoya, iimbono kunye nokuphuma okungxamisekileyo.
Ilungisiwe: Izibane zelanga ezihleliweyo zibonelela ngokukhanya okukhulu kwaye akukho mfuneko yokuba zivulwe okanye zivaliwe. Ezi zihlala zifakwa kwisilingi ende engenakufikelelwa ukuvula kunye nokuvala njengoko kufuneka.
Umoya: Isibane esikhanyayo somoya sifana nokufaka ifestile eluphahleni. Ezi ntlobo zezibane zelanga zinokuvulwa kwaye zivaliwe njengoko kufuneka ukuvumela umoya kunye nokukhanya kwemini.
Yakhiwe: Isibane esibhakabhakeni sendlu sifakelwe ngaphezulu kwesibane esikhanyayo ukuze sinike uyilo olwahlukileyo kunye nokwenza ukukhanya kungakhange ngokuthe ngqo kwisithuba.
Izibhakabhaka zesibhakabhaka: Iibhubhu ezikhanyayo zetyhubhu zisetyenziswa kwiindawo ezixineneyo kwaye zibonelela ngombala ongaphakathi ohlengahlengiswayo. Oku ikakhulu kukwenzelwa ukukhanya kwemini xa kuthelekiswa nesiqwenga esibonakalayo.
uthini umnwe wakho weringi
Ixabiso elongezwe ekhaya: I-Skylights yongeza ixabiso elikhulu ekhaya, kuwo omabini amacandelo oyilo kunye nenxalenye yomsebenzi wokukhanya. Iibhakabhaka ezikhanyayo zinokongeza umboniso wokukhanya kunye nokubamba ngamehlo, ngelixa unciphisa isidingo sokukhanyisa ngombane.
Izinketho zoyilo: Kukho itoni yokhetho xa kufikwa kubungakanani, indawo, imilo kunye nee-angles xa kufikwa kwizibhakabhaka. Oku kunokunyusa kakhulu ukuguquguquka kwesibhakabhaka kuba zinokusetyenziswa phantse nasiphi na isitayile kunye noyilo.
Ukukhanya kwemini: Enye yezona zinto zibalulekileyo ekuthatheni isigqibo sokusebenzisa ukukhanya kwelanga kukukhanya kwemini okubonelela ngendawo. Oku kuluncedo ngakumbi ebusika xa i-engile yelanga isezantsi kwaye iifestile azinakuthatha ukukhanya okuninzi njengokukhanya kwesibhakabhaka.
Ukonga umbane: Ngenxa yokongezwa kwemini kuziswa esithubeni, ukonga umbane kunyuka. Akukho sidingo sincinci sezibane eziphezulu ngexesha lasemini kunye nolawulo lobushushu kwiinyanga zobusika. Oku kulungele amatyala kunye nokusingqongileyo.
Umoya: Iindidi ezininzi zokukhanya kwesibhakabhaka zinokuvulelwa ukujikeleza komoya. Oku kuluncedo ngakumbi kwiindawo ezinokuxhamla kumoya omtsha okanye umoya opholileyo.
Iimbono zangaphandle: Ukongezwa kwesibane esibhakabhakeni kunokubonelela ngemibono ngaphandle ephantse ibe sisibonelelo.
Ubushushu okanye ukukhanya ngaphezulu: Ngelishwa ilanga alikho phantsi kolawulo lwethu, oko kuthetha ukuba amanqanaba okukhanya kunye nobushushu nawo awukho phantsi kolawulo lwethu.
Oku kunokubangela ukufudumeza okanye ukukhanya kwizakhiwo kunye nezibhakabhaka phezulu eluphahleni ekunokuba nzima ukuzilungisa.
Oku kungalawulwa ngokubekwa, ubungakanani kunye nokumila kwesibhakabhaka. Ukuba yinkxalabo enkulu kunokubakho i-shades ezizenzekelayo efakelwe isibhakabhaka.
UkuFudumeza kunye neMeko zoMoya: Banokuvumela umoya ofudumeleyo ukuba uphume ngokuvula ebusika kunye nomoya opholileyo ukuba ubaleke ehlotyeni. Ziye zithambekele ekufumaneni umphunga wamanzi kwifestile yefestile.
Ukufakwa: I-Skylights yinto enzima ukuyakha okanye ukuyifaka. Ukutywinwa kwesibhakabhaka kufuneka kwenziwe ngokufanelekileyo kungenjalo banokuvuza kwaye bawele kwisakhiwo esingezantsi.
Nokuba ukuvuza okuncinci kunokuba yinto eyingozi. Isibane esibhakabhakeni kufuneka sikhuseleke ngokupheleleyo eluphahleni njengoko ngaphezulu kwaye sisoloko sisilwa nomxhuzulane.
Ulondolozo / Ukucoca Ukucocwa kunye nokugcinwa kwesibhakabhaka kunokuba nzima kakhulu, ngenxa yokuphakama kwayo. Kukho isidingo sophahla yokuphakama kweeleli okanye izinto ezandisiweyo zokucoca ukufikelela kwiwindow.
Ukulungisa amatywina kunye nayo nayiphi na enye into esibhakabhakeni kwenziwa kwinqanaba lophahla, elinokuba nzima kunokuba kusekelwe kubungakanani kunye nolwakhiwo lwesibane esikhanyayo.
Ukongeza isibane esibhakabhakeni ekhaya kukho amanyathelo ambalwa ekufuneka egqityiwe.
Emva koqokelelo olufanelekileyo lwempahla kunye nokhuseleko, kufuneka umntu asike umngxuma eluphahleni lobume obufunekayo kunye nobukhulu.
Ukusuka apho indawo kufuneka ikhanyise, kwaye emva koko isibhakabhaka sinokufakwa. Okulandelayo isibane esibhakabhakeni kufuneka sitywinwe kakuhle eluphahleni. Eli nyathelo libalulekile kungenjalo kuya kubakho ukuvuza kwimveliso yokugqibela.
Isibane esibhakabhakeni kufuneka emva koko sikhanyise kwisill ezantsi kwaye inyathelo likhanyise emacaleni.
Ukulandela oko kuya kubakho ukubengezela emacaleni nakwisihlalo sokugqibela esidanyazayo. Emva kokuba onke la manyathelo egqityiwe, kufanele ukuba kubekho ukucoca okuncinci kwaye ukukhanya kwesibhakabhaka kufakiwe!
Oku kuhlala kuyinkqubo eyenziwa ziingcali ngokuxhomekeke kubungakanani kunye nenqanaba lobunzima.
Ngelixa ingelilo ukongezwa okungabizi ngaphambili, isibhakabhaka esikhanyayo sinokunceda ukugcina imali kumatyala ombane anokuthi aphumeze iindleko zokufaka ekuhambeni kwexesha.
Amaxabiso ayahluka ngokuxhomekeka kwiindidi, ubukhulu kunye nolunye ukhetho loyilo. Oko bekutshiwo, uluhlu lwamaxabiso aphakathi onokujonga malunga ne- $ 1000 ukuya kwi-2500 yeedola ukufaka isibhakabhaka. Ezabasebenzi ziya kuba lelinye lawona macandelo abiza kakhulu kwiprojekthi iyonke.
Umgangatho osisigxina windows zinokuvela ukusuka kwi-100 ukuya kwi-1500 yeedola ngefestile.
Ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni kunokuqhuba malunga ne-300 ukuya kwi-2500 yeedola kufakelo ngalunye.
Izibhakabhaka ezisesibhakabhakeni zinokubiza malunga ne- $ 450 ukuya kwi- $ 1300 ngefestile nganye.
Isibhakabhaka esibhakabhakeni sedome sinokubaleka malunga ne-250 ukuya kwi-3000 yeedola ngefestile.
Elinye lala maxabiso lelowefestile lilodwa, ukongeza iindleko ezongezelelweyo ze- $ 500 ngeyure yofakelo. Ixesha elithathwayo linokuxhomekeka kwiimeko zekhaya kunye nakumanqanaba obunzima beprojekthi.
I-skylights zixabisa imali! Iibhakabhaka ezikhanyayo azange zongeze ixabiso kuphela ekhaya, kodwa zinokunceda ukugcina kwiindleko zombane zekhaya.
Ngokusekwe kwisitayile kunye nohlobo olukhethileyo unokufumana ngakumbi okanye kancinci ukukhanya kwemini, ukungena komoya kunye nokugcina ubushushu. Ukongeza, bongeza ixabiso elikhulu lokuthengiswa kwakhona kwimbonakalo yabo kunye neempawu zabo zokusebenza.
Izibhakabhaka ezikhanyayo zibuyela umva kunye nokufuna okuhlaziyiweyo kozinzo kunye nokukhanya kwemini. Abanye bazama ukuthi ukukhanya kwezulu kutshintshwe kutshanje, kodwa kungenxa yokuba abanini bebengakulungelanga ukugcina isibhakabhaka.
Kule mihla nakwiminyaka yobudala abanini khaya banomdla kwimbonakalo kunye nokusebenza kweendawo ezikhanyisa isibhakabhaka kwaye baya kuthatha uxanduva lolondolozo xa kufika ixesha.
Ngaba zikhona iingenelo kunye neengozi zezikhanyiso esiziphosileyo? Sazise kumagqabantshintshi ukuba sabelane ngeengcinga zakho. Bona ezinye izinto ezinxulumene noko izimvo zelanga ekhitshini iphepha.
iringi yomtshato ngasekhohlo okanye ngasekunene
izipho ezibonisa uthando kumyeni
iikhabhathi zekhitshi ezipeyintiweyo
Ngaba i-hoda kotb ibandakanyeke ku-joel schiffman
I-jewelers zeringi yedayimane epinki